Degso Football Manager 2022 loogu talagalay Windows
Degso Football Manager 2022
Degso Football Manager 2022,
Maareeyaha Kubadda Cagta 2022 waa ciyaar maareynta kubbadda cagta Turkiga oo lagu ciyaari karo kombiyuutarada Windows/Mac iyo aaladaha mobilada ee Android/iOS. FM22 waxay bixisaa habab cusub oo horumarsan si loo helo kooxdaada guuleysata, loo beero qaabkaaga kubbadda cagta, loona guuleysto taageerayaasha. Maareeyaha Kubadda Cagta 2022 wuxuu ku socdaa Steam isagoo leh qiimo dhimis 10% ah oo horay loo dalbaday!
Maamulaha Kubadda Cagta 2022 Steam
Kubadda cagta kaliya maahan inaad noqoto kan ugu fiican oo guuleysta. Waxay ku saabsan tahay wax ka qabashada fursadaha, fulinta riyadaada, iyo kasbashada guushaada iyadoo loo marayo xariifnimo iyo xirfad. U halgama sidii aad u gaadhi lahayd meesha ugu sarraysa oo aad jidkaaga u gasho si aad dunida uga yaabiso ama aad uga soo kabsato qarka godka; Kuwani waa daqiiqadaha ugu macaan.
Waxaad tahay naqshadeeyaha aayaha kooxdaada, masiirkooda adiga ayaa iska leh. Ku guuleysto daqiiqadaha muhiimka ah oo booskaaga ka ag dhow maamulayaasha si aad uga dhabeyso riyada kooxdaada.
Safarka ugu sarreysa ciyaarta adiga oo buuxinaya yoolalka madaxda kooxdaada iyo filashooyinka sare ee taageerayaasha.
Ku sahami adduunka hibo aan la daahfurin ama kooxdaada ka dhis gudaha oo u tababar inay gaaraan kartidooda.
Dhis aqoonsi kubadeed oo ciyaartooydaada ku mashquuliya xeelado iyo xeelado loogu talagalay inay guul u keenaan kooxdaada maalinta ciyaarta.
Goorma ayaa la siideyn doonaa Maareeyaha Kubadda Cagta 2022?
Maareeyaha Kubadda Cagta 2022 taariikhda la siideynayo ayaa lagu dhawaaqay 9 -ka Nofeembar. Helitaanka Hore wuxuu bilaaban doonaa qiyaastii laba toddobaad ka hor Nofeembar 9 -keeda. Horay u dalbo Steam si aad u noqoto mid ka mid ah kuwa ugu horreeya ee ciyaara. Waxaad heli kartaa 10% dhimis ka hor intaan la siidayn adiga oo ka iibsanaya Maamulaha Kubadda Cagta 2022 PC/Mac Dukaanka rasmiga ah ee SEGA, Steam, Ciyaaraha Epic, Dukaanka Microsoft. Maamulaha Kubadda Cagta 2022 qiimaha waa 269 TL.
Maareeyaha Kubadda Cagta 2022 Mobile
Maamulaha Kubadda Cagta 22 Mobile ayaa sidoo kale la siidayn doonaa 9 -ka Nofeembar. Diiwaangelinta hore ee App Store iyo Google Play ayaa furmi doona badhtamaha Oktoobar. Isla mar ahaantaana, dhammaan faahfaahinta ku saabsan hal -abuurka ka dhex muuqda ciyaarta kubbadda cagta ee guurguura waxaa lagu soo bandhigi doonaa taariikhahaas. Sida ugu dhakhsaha badan ciyaarta ayaa loo sii daayaa, Maareeyaha Kubadda Cagta 2022 link download APK ayaa lala wadaagi doonaa dadka isticmaala taleefanka Android.
Maareeyaha Kubadda Cagta 2022 Shuruudaha Nidaamka
Qalabka aad u baahan tahay inaad ku ciyaarto Maareeyaha Kubadda Cagta 2022 -ka PC -ga waxaa lagu siiyay Maamulaha Kubadda Cagta 2022 shuruudaha nidaamka ugu yar:
Nidaamka hawlgalka: Windows 7 64-Bit, 8/8.1, 10
Processor: Intel Core 2 ama AMD Athlon 64 1.8GHz+
Kaarka Fiidiyowga: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT, AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 - 256 MB VRAM
DirectX: Nooca 11
Kaydinta: 7 GB oo bannaan
Football Manager 2022 Noocyada